Nagarik News - युद्धविरोधी कथा 'उमा'
युद्धविरोधी कथा 'उमा'
27 May 2013 | 10:41am
सोमबार १३ जेष्ठ, २०७०
नेपाली फिल्ममा दुई धारको बहस निकै चल्यो। निर्माताहरु 'मूलधार'का फिल्म बनाउँथे। सूत्रवद्ध र मसलायुक्त फिल्म मूलधारमा दर्ता हुन्थ्यो। विचारकहरु 'वैकल्पिक धार'को वकालत गर्थे। सूत्र र मसलामुक्त भए वैकल्पिक धारको मान्यता दिइन्थ्यो। तर, यस्ता फिल्म बनाउन तम्सिनेको संख्या अत्यन्त थोरै रह्यो। किनभने 'मूलधार'को बनाए पैसा उठ्थ्यो।
निर्देशक: छिरिङरितार शेर्पा
लेखक: छिरिङरितार, छिरिङ छोदेन र कुमार भट्टराई
निर्माता: मिला प्रोडक्सन्स
कलाकार: ऋचा शर्मा, सौगात मल्ल, मिथिला शर्मा, प्रवीण खतिवडा, प्रमोद अग्रहरि, पुष्कर गुरुङ, प्रकाश घिमिरे आदि।
उद्योगको अनुहार फेरिँदै गएको छ। वैकल्पिक धारबाट प्रेरित फिल्मकर्मी मौलाएको देखिन्छ। तर, बजार राम्रो भएकोले होइन, मूलधारले पनि पैसा उठाउन छोडेकोले। पैसा नभए 'प्रशंसा'को आशमा फिल्मलाई यथार्थसँग नजिक बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ। यसमा फिल्म पढेका युवापुस्ता बढी सक्रिय छन्।
उद्योगमा दुई धारका 'अतिवादी'को छुट्टाछुट्टै पंक्ति बनिरहेका बेला डकुमेन्ट्रीमा गहकिलो चिनारी बनाएका छिरिङरितार शेर्पाको कथानक फिल्म 'उमा'ले दर्शकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'मुकुण्डो'जस्तो 'आर्ट फिल्म' बनाएका शेर्पाले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा साधारण फिल्म बनाएका छन्, सबैलाई छुने। दुवै धारका हिमायतीले 'आफ्नो' दाबी गर्न मिल्ने। 'फिल्ममा कला छाँट्ने कि भावना पोख्ने?' भन्ने बहसबीच उनले भावनालाई कलात्मक ढंगले पेश गर्ने लोकप्रिय बाटो अपनाएका छन्।
फिल्म द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा छ। तर, यसले कसैको पक्ष लिइएको छैन, दुवैको विकृति लुकाएको पनि छैन। पक्षपोषण र अतिरञ्जनाबाट फिल्मलाई मुक्त बनाउन छिरिङ सफल छन्। यस्तै विषयमा बनेका अधिकांश फिल्म एकपक्षीय, विभत्स र 'लाउड' थिए। माओवादी फिल्मकर्मी नै संलग्न भएका फिल्महरु पनि जनयुद्धको यथार्थभन्दा अलग थिए। यथार्थलाई 'फिल्मी' बनाउने कौशल उनीहरुमा नदेखिँदा दर्शकमा कुनै छाप देखिएन। जनुयुद्धको कथा बेचेर कमाउने होडमा यस्ता फिल्म बने, हराए।
'उमा'मा द्वन्द्व छ, हेर्नै नसकिने हिंसा छैन। परिबन्दले एउटा साधारण नागरिकलाई कसरी छपामार बनाउँछ भन्ने देखाउन र प्रहरी दमनका कारण यस्तो संख्या बढेको बुझाउन छिरिङले मजैले सकेका छन्। पत्रकार नारायण वाग्लेको धारणामा यो 'मानवीय पक्ष लिएको, प्रोपोगान्डाबाट मुक्त, हिंसाको चर्को दृश्यरहित फिल्म हो। जसमा अभिनय बेजोड छ। पछाडिको १० मिनेट भने हलमा धेरैदिन चलाउने मानसिकताले बनाइएको जस्तो लाग्छ।'
वाग्लेले औल्याए जस्तै छोटै भूमिकामा देखिए पनि सुनील सर (प्रकाश घिमिरे) र अनील कायस्थ (प्रवीण खतिवडा) गहकिलो छाप छोड्न सफल छन्। मिलन (सौगात मल्ल), उमा (ऋचा शर्मा) र आमा (मिथिला शर्मा)को छनोट सही छ। फिल्मको पटकथा बगेको छ। कतै केही बिग्रिएको जस्तो लाग्छ तर त्यसको बारेमा सोच्न नपाउँदै नयाँ दृश्यले समातिहाल्छ। संवाद मौलिक छ, फिल्मी छैन। 'उमा'लाई यथार्थसँग नजिक तर प्रचुर 'ड्रामाटिक' फिल्मभन्दा फरक पर्दैन। नाटकीय पक्षलाई स्वाभाविक तुल्याउने जमर्को गरिएकाले राम्रो लाग्छ। यसो गर्न छायाँकार पुरुषोत्तम प्रधान अब्बल देखिएका छन्
कुन क्यामेराले खिचे 'ए' ग्रेडको मान्ने? भनेर वर्गीकरणको परिभाषामा रुमल्लिरहेका पण्डितहरुलाई सामान्य 'क्यानोन फाइभ डी' क्यामेराले चुनौती दिन्छ। क्यामेराको प्रयोगमा 'कुन'भन्दा 'कसरी' महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन 'उमा' सक्षम छ।
फिल्मका सटहरु अर्थपूर्ण छन्। विचारको उतारचढाव बुझाउन हल्लिएको सटले सहयोग पुर्याोएको छ। माकुरोको जालोबाट उमालाई देखाइएको सटले उनी फन्दामा परेको संकेत गर्छ। क्यामेरा एंगलले अर्थ लगाउने दृश्य ठाउँठाउँमा छन्। फिल्ममा विम्ब र प्रतीकको अधिक प्रयोग गरिएको छ। गीत अर्थपूर्ण र दृश्यलाई बलियो बनाउने खालका छन्। क्लाइमेक्ससम्म आइपुग्दा दृश्यमा खेल्न सक्षम व्यक्तिका रुपमा निर्देशकले आफूलाई पुष्टि गरेका छन्।
धेरै ठाउँमा 'टि्रटमेन्ट' नौलो लाग्दैन। तर, सही ठाउँमा गरिएजस्तो अवश्य लाग्छ। अनीलले उमाको चुँडिएको चप्पल गाँसिदिन्छ, मायाको सम्बन्ध जोडिन्छ। यो दृश्य 'सिम्बोलिक' छ। तर, पहिलो भेटमै गाउँ घुमाइदिएको त्यति सुहाउँदैन। असई मिलन ड्युटीको कुरा घरमा भन्दिनँ भन्छ तर घरबाटै अफिस आउनेजाने गर्छ। चौकीमा कम घरमा बढी देखिँदा उनलाई प्रहरी अधिकृतको रुपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन।
बच्चाहरुले इन्सपेक्टर धिरेन (अशोक शर्मा)को घरमा ढुंगा हानेको र उनीहरुलाई पुलिसले गोली ठोकेको दृश्य तुलनात्मक रुपमा अपरिपक्व छ। राती पानीमा रुझेर लास गाड्दै गर्दा पुलिसले गरेको 'गोल्ड क्वेस्ट'को गफ स्वाभाविक लाग्दैन।
उमा परिबन्दमा परेर मओवादी बनेको दृश्य जति सान्दर्भिक छ, घर आएका बेला 'आत्मसमर्पण गर म केही हुन दिन्न' भनेर दाइले फकाउँदा नमान्नुमा बलियो कारण छैन। उमालाई छापामार र युद्धप्रेमीका रुपमा रत्याउन निर्देशकले सकेका छैनन्। त्यसैले उनी फर्किएको दृश्य कमजोर बनेको छ। प्रेमी गुमाएकी उमाले छिट्टै अर्को छापामार मनपराएको र शारीरिक सम्पर्क भएको दृश्य 'क्लाइमेक्स'लाई थप संवेदनशील तुल्याउने चेष्टाले राखेको जस्तो देखिन्छ। तालिममा खासै रुचि नदेखाएकी, कुनै दुश्मन नबनाएकी उमाले छामापारको रुपमा कसरी बढुवा पाइन् भन्ने जस्ता सानातिना समस्या यसका छन्।
तथापि 'हरेक सटले एउटा कथा भन्न सक्नुपर्ने' चुनौतीलाई शेर्पाले अधिकांश ठाउँमा पूरा गराएका छन्। 'कास्टिङ'लाई समेत उनले कलाकार चिनाउन मात्र नभएर दर्शकलाई फिल्मको सन्दर्भ बुझाउन र द्वन्द्वबाट प्रभावित फिल्म हेर्न तयार बनाउने काममा प्रयोग गरेका छन्। आम नेपाली 'फर्मुला फिल्म'मा जे चिजको प्रयोग सावधानी र स्वाभाविक रुपमा भएको छैन त्यो 'उमा'मा छ। युद्धमाथि बनेको फिल्म भए पनि यो युद्धविरोधी छ।
« भोको पेटको अघाउने कथा : अन्तराल (फिल्म समीक्षा) इन्जिन खटारा, डेन्टपेन्ट नयाँ »
२०५८ सालदेखि पत्रकारितामा सक्रिय सन्तोष रिमाल नागरिक दैनिकको शनिबार ब्युरोको संयोजक हुन्। उनी सामाजिक मुद्धा, फिल्म समीक्षा र फिचर लेखनमा दख्खल राख्छन्।
सन्तोष रिमालLatest from
त्यागी सन्त प्रपन्नाचार्य
बादलपारिको फिल्म र राहत
पुनर्निर्माण चुनौती: गाउँसहर कस्तो बनाउने?